हामी लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा छौं :अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा (अर्थमन्त्रीसँग अन्तर्वार्ता) « Post Khabar
हामी लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा छौं :अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा (अर्थमन्त्रीसँग अन्तर्वार्ता)
Published on: 11 January, 2020 4:11 pm
काठमाडौँ – अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले देशको समग्र आर्थिक सूचकहरु स्वस्थकर रही देशको अर्थतन्त्र सही ‘ट्र्याक’मा अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयन सफलतातर्फ उन्मुख भएको र छोटो समयमै वित्तीय सङ्घीयताका विषयमा देखिएका अस्पष्टता ‘क्लियर’ भई कार्यान्वयन हुन थालेको उल्लेख गर्नुभयो । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले देशको समग्र क्षेत्र नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)का लागि रमेश लम्साल र अशोक घिमिरेले अर्थमन्त्री डा खतिवडासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
व्यापार घाटाको बारेमा त हामीले जन्मेदेखि सुन्दै आएका हौँला, जुन दिनदेखि व्यापारका तथ्याङ्क भए, सन् १९७५ देखि यता व्यापारका तथ्याङ्क छन् । मैले त्यसयताको व्यापारका तथ्याङ्क हेरिराखेको छु । मैले अध्ययन पनि गरेको विषय हो यो, बचत भएको स्थिति छैन तर, पनि यी घाटा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतसम्म पुग्दा स्थिति अप्ठ्यारो भएकै हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले व्यापारमा परिमाणात्मक बन्जेद लगायौँ । कुनै वस्तुको आयात नै निषेध गर्यौँ ।
कुनै वस्तुमा भन्सार तथा मूल्याङ्क बढायौँ । कुनै वस्तुको गुणस्तरबाट नियन्त्रण गरेर आयात प्रतिस्थापन पनि गर्यौँ । केही वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित पनि ग¥यौँ । केही वस्तुको उत्पादनमा स्वदेशमै बढ्ने क्रमले पनि मासिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि आयात समग्रमा छ÷सात प्रतिशतले घटेको अवस्था छ । यो आर्थिक वर्षभरिमा आयात नियन्त्रित नै रहन्छ । निर्यात उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । अहिले करिब २४/२५ प्रतिशत निर्यात वृद्धि भएको छ तर, यो आकारै सानो भएकाले यो वृद्धिले हामीलाई पुग्दैन । जति वृद्धि भए पनि त्यसको आधार नै सानो भएपछि त्यसले व्यापार सन्तुलन हुँदैन । व्यापार घाटामा सुधार हुन्छ, तर व्यापार घाटामा उल्लेख्य सुधार भएर व्यापार सन्तुलन बचतमा गयो भन्नलाई हामीले धेरै वर्ष पर्खनु पर्छ । यो बुझ्नु पर्छ, सङ्केत सकारात्मक छ ।
साउनको एक/दुई हप्तासम्म पनि त्यसको ‘लिगेसी’ बाँकी नै हुन्छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याएर पनि अर्को वर्षको तयारी गर्ने मनस्थिति बनेन । अब यो कहिले ‘ब्रेक’ गर्ने हो । कुनै एउटा मन्त्रालयले, सचिवले डेढ महिना दोब्बर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु आवको बजेट पनि त्यही महिना सक्नुपर्ने हुन्छ । अर्को वर्षको काम पनि गर्नुपर्छ, त्यो कसले गरिदिने हो, नभए त्यही दोहोरिने भयो अर्को वर्ष पनि, एउटा समस्या यो देखेँ मैले ।
एक/दुई वटा विवादहरु छन्, ती भनेका कानूनी विवाद हुन् । उदाहरणका लागि वनको कर, वन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि छन् । त्यसो भएकाले वनको राजश्व सबै हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने स्वाभाविक सबैको दावी हो । त्यो भएर कानूनबाटै हामीले मिलाउनुपर्ने छ । सम्पत्ति कर स्थानीयलाई दिइएको छ । हाम्रा नगरपालिका यस्तो पनि छन्, जो खेतीयोग्य जमीन छन् । खेतीयोग्य जमीनको बीचमा घर बनाएर कोही बसेको छ । हेर्दाखेरी सम्पत्तिमा परिभाषित गरियो । नगरपालिकाले यो सम्पत्ति हो भन्छ, कृषक जो खेतमा बसेका छन् ऊ भन्छ, यो त खेती गरिरहेको जमीन हो । मालपोत तिर्नुपर्ने जमीन हो, कहाँ सम्पत्तिकर तिर्ने । दुवैका कुरा मिलाउनुपर्ने छ । यस्ता विवाद पनि अहिलेको बजेटबाट हामीले केही मिलायौँ । मूलतः मूल्याङ्कनमा समस्या छ । त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन कति गर्ने र जनतालाई कति कर लगाउने ? तिर्न सक्नेमात्र कर लगाउने हो नि ? त्यसो हुनाले सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र परिभाषामा केही मिलेको छैन । व्यक्तिको घरबहाल कर स्वतः स्थानीय तहले उठाउन पाउने कानून छ । तर, संस्थाले आफ्नो घरबहालमा दिएको छ भने त्यो आयकरमा जोडिन्छ जुन सङ्घमा छ ।
हाम्रा सबै सडक घटीमा दुई लेनका हुन्छन् । राजमार्ग चार/छ लेनमा स्तरोन्नति हुन्छन् । केही मार्ग आठ लेनका पनि बन्छन् । सिङ्गल लेनको त अब हामी बनाउँदै बनाउँदैनौँ । सडक सुरक्षाका कार्यक्रमसहित अगाडि बढेको छ । सडकले मात्र पुगेन भनेर रेल्वेको कुरा पनि गरेका छौँ । तर, रेल्वेमा डिपिआर गर्न घटीमा दुई वर्ष लाग्छ । निर्माण हुन पाँच÷सात वर्ष लाग्छ ।
अब अहिले हामी डिपिआर सम्पन्न गरेर निर्माण गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । यो एउटा गेम चेन्जर हुन्छ । अब सवारीसाधनको गेम चेन्ज हुन्छ । अब घुम्ती बाटोका ठाउँमा सुरुङमार्गबाट जान्छौँ । अघिल्लो आवको बजेटमा छ वटा सुरुङ निर्माण गर्ने भन्यौँ । केही डिपिआर तयार भएका छन् । यस वर्ष एक/दुई वटा निर्माण शुरु हुन्छन् । पानी जहाज ठट्टाको विषय बनाइन्थ्यो, तर यो गेम चेन्जर हुन थाल्या छ । अहिले भारतसँग सम्झौता ग¥यौँ, साहिवगञ्ज र कलकत्ताबाट ल्याउने कुरा गरेको छौँ । अब खाली पानीजहाज सञ्चालन गर्ने ऐनको व्यवस्था गर्नुछ । हाम्रा नदीमा पानीजहाज चल्न थाले ।